Haweeney noolasha ku silicday ugu dambeyna Lib ka gaartay |
Helen Warade waa hooya 3 carruur ah oo ay dhashay oo ay weliba aabba la’aan soo korsatay halmar ay si lama filaan ugu wada geeriyoodeen.
Dab gurigeeda qabsaday ayey hal mar ku wada gubteen 3 carruur oo ay iyadu dhashay, walaasheed iyo ilma ay walaasheed dhashay qoyskeeda oo guud ahaan ka kooban 5 qof.
“Carruurta inta ay iga geeriyoon ka hor waxaan dhibaata aad u badan kala kulmay korintooda iyo barbaarintooda caruurta oo 3 iskuul oo kala duwan wax ka baranaysay inaan iskuulka geeyo ama aan ka keeno waxay igu ahayd mid aad u adag” ayey tiri Helen.
Seddexada carruurta ah ee Helen marka wada geeriyooday Yoseef wuxuu ahaa 13 jir, Yasen oo 5 jir ah iyo Nisren oo 6 jir ah waxay ahaayeen ubaxyada ay dunida ka fiirsato.
Helen maxaa ku dhacay?
Maalin maalmaha ka mid ah ayey xaaladda qoyskeeda oo dhan si lama filaan ah iisu beddeshay.
Muddo hadda 10 sano laga jooga oo ku beegneyd 2010-ka, barqanimo Sabti ah guriga ay Helen ku nooleyd ayaa laga maqlay qaylo aad u daran, waxaana gurigeeda hortiisa ku uruursan dad badan oo ka soo jeeda dalka Itoobiya oo ku nool gobolka Seattle.
“Xilliga ay dhaceysay arrintan naxdinta leh hooyada ilmaha dhashay oo leh “carruurteyda ayaan rabaa” oo hadba dhinac u ordoyso dumar badan ay isku dayayaan iney dajiyaan ayaan arkayey” ayuu yiri wariya ka tirsan wargeyska Times oo dhacdadan faallo ka qoray goob joogna u ahaa.
Shilka damba ee markaa dhacay ee ay Helen 5 qof oo faamilkeeda ah oo ay 3 carruur ah ooay dhahsy ku jiraan ku weysay ayaa lagu sheegaa inuu yahay dabki ugu weynaa ee muddo toban sana ah ka kacay Seattle.
“Aniga waxa sida lama filaanka ah iigu dhacay waxay ahayd mid awooddeyda ka baxsan oo aan xammili waayey, carruurteyda aan ifka ugu jeclaa dabka waan ka badbaadin waayey, ilaa iyo hadda waxaa igu dhib ah inaan dhacadadaasi ka hadlo … (ilma ayaa indhaheeda ka qubaneysa) … runti dhib aad u weyn ayaa igu dhacay” ayey tiri Helen.
Helen marki ay dhulkeeda hooyo ka tageysay 2 jir ayey ahayd.
Kaddibna qoyskeeda ayaa u hayaamay dalka Sudaan muddo siddeed sana ahna halkaasi ku noolaa.
Helen marki ay magaalada Seattle tageysay waxay ahayd 10 jir, waxabarashada dugsi sare marki ay ka baxdayna ubad ayey dhashay mas’uuliyadda hooyanimana iyada ayuu dusaha ka fuulay ilaa ay caruurti ay dhashay shil kaa geeriyoodaan .
Fursadda labaad ee noolasha Helen
Helen waxay markastaba afkeeda aan laga waayin mahadnaqa iyo sharafta ay u hayso hooyadeed iyo dhammaan shacabka reer Seattle sida ay u garab istaageen xilligi ay masiibadu ku habsatay.
Muddo kaddib Helen waxay billaawday baalki madoobaa ee noolasha ka soo maray iney u aragto fursad ay cashar ka baraneyso kaddibna ay uga gudubta fursadda labaad ee noolasha.
“Waxkastaba ilaahey amarkii ayey ku dhacaan, ilaaheyna marki uu dhib kugu keenayo waxaa laga yaabaa wax ka wanaagsan inuu kuu diyaariyey samir iyo dulqaad kaddib, wuxuu ilaahey i siiyey laba wiil oo mataana ah oo aan ku indha qabowsado waa sababta aan u leeyahay wax kastaba amar ilaahey ayey ku dhacaan” ayey tiri Helen.
Helen waxay marwaliba aaminsaneed iney jirto noolal ka duwan tan xanuunka badan ee ay la kulantay oo sabab u noqon karta farxad, iyo bog cusub oo noolasha kuu laaban aad gasho.
“Dhibka i gaaray marka loo fiiriyo waxaan noqon lahaa darbijiif, rafaadsan, cudurna uuu wehliyo, Balse ilaahey masiibadi igu dhacday si aan u gudbo wuxuu iigu deeqa samir iyo dulqaad wuxuuna igu ilhaamiyey wixi wanaagsan inaan qabto” ayey tiri.
Dhacdadi xanuunka badneyd waxaa Helen illowsiiyey oo ay ku samirtay laba carruur oo mataana ah ay ay dhashay, hase yeeshee in mudda ah waxay la dhiibbaneyd iney aaminto iney carrurtan mataanaha ah iyadu dhashay oo ay ilmaheedu yihiin.
“Iyada oo ay hooya marweliba beer nugushahay ubadki ay dhashayna ay ka samri karin haddana inta karaankeyga waan is adkeeyey” ayey tiri.
Helen waxay qaadatay go’aan geesinimo leh?
Waxaan ku fakaray inaan dalkeeyga hooyo iyo halka ay waaliddiinteyda ka soo jeedaan aan ka aasaaso xaruun caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka lagu daweeyo.
Awooddeeda oo dhan waxay isugu geysay iney fikirkeeda ka mira dhaliso.
Ugu dambeyntina magaalada ayaa waaliddiinteeda ka soo jeedeen ee Shire-Indesillaase waxay ka dhistay xaruunti caafimaad oo ay in muddo ah dadaalka u soo gashay.
Xaruunti caafimaadka ee ay Helen dhistay waxay hadda bixisaa adeeg caafimaad oo dhammeystiran, balse fikirka ay Helen damacsan tahay intaa un kuma eka balse waxay rajeeyneysaa howla intaa ka waaweyn iney ka qabato dalkeeda hooya ee Itoobiya.